Zvaifungwa naAristotle Nezvezvakaita Nyika
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
MAKORE anodarika 2 300 akapfuura, vanhu vakawanda vaishandisa ruzivo rwaAristotle pasainzi uye paphilosophy. Zvaainyora zvaifarirwa uye zvakatoshandurwa mune mimwe mitauro kuti vamwe vatodzidzawo. Purofesa James MacLachlan akati “zvaidzidziswa naAristotle nezvezvinhu zvakasikwa ndizvo zvaishandiswa kuEurope kwemakore anenge 2 000.” Zvimwe zvacho zvakatoshandiswawo nechechi yeRoma, nedzimwe dzakabuda muRoma uyewo nechitendero chechiIslam.
Akaongorora Zvinhu Zvakasiyana-siyana
Aristotle aifarira kuongorora zvenyeredzi, tsika nemagariro, mutauro, mutemo, zvematongerwo enyika, mashandiro epfungwa, nhetembo, biology, magnetism, metaphysics, motion, art, logic uyewo nezvemweya waaiti unofa. Asi anonyanya kuzivikanwa nezvebiology uye zvelogic.
Nyanzvi dzechiGiriki dzaishandisa zvinhu zvadzaiona nemaziso kuti dzitsanangure magadzirirwo akaitwa zvinhu zvakasikwa. Vaitanga nezvinhu zvanga zvagara zvichitozikanwa, uye vaiti kana vakaongorora vachitangira pazvinhu zvinozivikanwa, zvichavabatsira kuti vasazorasika.
Mafungiro aya akavabatsira kunzwisisa zvinhu zvakawanda uye kurongeka kwakaita zvinhu zvakasikwa. Asi sezvo vaingoshandisa maziso pasina michina inovabatsira, zvakaita kuti Aristotle nenyanzvi idzi varasike pane zvimwe zvinhu. Semuenzaniso, vaifunga kuti mapuraneti nenyeredzi zvinotenderera nyika. Makore iwayo vakawanda ndozvavaitofunga. Bhuku rinonzi The Closing of the Western Mind rinoti, “ongororo dzaiitwa dzairatidza sedzaitsigira zvaifungwa nevaGiriki zvokuti pazvinhu zvose zvakasikwa nyika ndiyo iri pakati.”
Dai mafungiro iwayo asiri echokwadi asina kuzopinda muchechi dai zviri nani.
Chechi yeRoma Yakabvuma Dzidziso dzaAristotle
Kare kuEurope, vaKristu vakanga vava kudzidzisa dzidziso dzaAristotle nekuti vanhu vaiti ndedzechokwadi. Vamwe vanoongorora dzidziso dzechechi yeRoma vakadai saThomas Aquinas (c. 1224-1274) vakatanga kudzidzisa dzidziso dzaAristotle. Saka dzidziso yekuti pazvinhu zvose zvakasikwa nyika ndiyo iri pakati yakabva yatopinda muchechi yeRoma. Vatungamiriri vemachechi akabuda muRoma vakadai saCalvin naLuther, vakabva vazvitorawo vachitoti ndizvo zvinodzidziswa neBhaibheri.—Verenga bhokisi rakanzi “ Havana Kunzwisisa Zvinodzidziswa neBhaibheri.”
Vanhu vaifunga kuti dzimwe dzidziso dzaAristotle ndedzechokwadi
Mumwe munyori anonzi Charles Freeman anoti, ‘unotadza kuona musiyano padzimwe dzidziso dzaAristotle nedzeRoma.’ Zvinonzi Aquinas akatendeutsa Aristotle kuti ave muRoma. Asi chokwadi chiripo ndechekuti, “Aquinas ndiye akatotendeutswa naAristotle,” akanyora kudaro Freeman. Uye tinogonawo kuti naiyowo chechi yeRoma yakatendeutswa. Galileo, muongorori wenyeredzi uye nyanzvi yemasvomhu, aiti nyika ndiyo inotenderera zuva, saka akamiswa pamberi pedare achinzi ataure kuti zvaanga aongorora ndezvekunyepa. * Nekufamba kwenguva Aristotle akazoona kuti ruzivo rwesainzi runoramba ruchiwedzera. Dai zviri izvo zvakaitwawo nemachechi!
^ ndima 11 Kuti unzwe zvakawanda nezvaGalileo verenga nyaya inoti, “Galileo’s Clash With the Church” muMukai! yeChirungu yaApril 22, 2003.
Aristotle aida zvekudzidza uye “aikoshesa chaizvo zvinhu zvakasikwa uye kunaka kwazvakaita.”—Aristotle—A Very Short Introduction.
Aiti pane munhu ane simba, asingafi, anoita kuti mapuraneti arambe achitenderera, uye anoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka-naka.
Aristotle anonzi ndiye akatanga nezvebiology uye zvelogic.
Aristotle akadzidzisa mukomana wekuMakedhoniya uyo akazova mambo akakurumbira weGirisi ainzi Alexander.
Vakawanda vaiti nyika ndiyo iri pakati pezvimwe zvakasikwa
Havana Kunzwisisa Zvinodzidziswa neBhaibheri
Vamwe vaongorori vechitendero vaisimbirira padzidziso yaAristotle yekuti zvese zvakasikwa zvinotenderera nyika. Vaizvitorera pamavhesi akadai saPisarema 104:5 inoti: “[Mwari] akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji; haizozununguswi nokusingagumi.” Munyori weBhaibheri akanga asiri kurondedzera kuti nyika yakaiswa papi. Yaiva nhetembo yairatidza kuti nyika icharamba iripo sekutaura kwakaita Mwari.—Muparidzi 1:4.
Saka Bhaibheri parinotaura zvinhu zvesainzi, harinyepi. Semuenzaniso, Jobho 26:7, yakanyorwa makore anenge 3 500 akapfuura, inoti Mwari “akaturika nyika pasina chinhu.” Jobho 38:33 inotaura kuti zvinhu zviri muchadenga zvine mitemo yazvinotevedzera.